Janrain: Weghara ma bulie mmekọrịta gị na Social | Martech Zone
Janrain: Weghara ma bulie Ọnọdụ Gị
Monday, July 30, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Yabụ ị nwetala nnọkọ mmekọrịta gị na mmekọrịta gị na nke a. Na-agbakwunye Fans na ndị na-eso ụzọ kwa ụbọchị ma na-enweta ọtụtụ ndị ọbịa na saịtị gị. Mgbasa mgbasa ozi na-enye gị uto, mana ị naghị ahụ nloghachi nke itinye ego na ndị niile na-elekọta mmadụ na-ekwu okwu. Mgbasa mgbasa ozi yiri ka ọ bụ nnukwu ụgbụ a, mana ị naghị ejide ihe ọ bụla n'ihi na onye ọ bụla na-amị na oghere.
E nwere ihe abụọ dị oke egwu mgbe ọ bịara n'ịzụ ahịa mgbasa ozi mmekọrịta:
Na-agbanwe onye ofufe ma ọ bụ onye na-eso ụzọ n'ime atụmanya ma ọ bụ onye ahịa. Naanị n'ihi na ndị mmadụ na-eso gị ma ọ bụ na-amasị gị na peeji nke anaghị egosi na ha na-n'ezie na-apụ na-na gị ahịa mgbalị.
Inweta onye ofufe ma ọ bụ onye na-eso ụzọ bulie ozi gị na ha na netwọk. Netwọk gị bụ isi dị ike, mana ọ fọrọ nke nta ka ọ dị ka ike dị ka ịnweta ọnụ ahịa site na netwọkụ onye ofufe.
Janrain Engage jikọtara ọdịiche ahụ na ọnọdụ abụọ ndị a, na-enye saịtị gị usoro nbanye zuru ụwa ọnụ iji weghara data onye ọrụ, yana inye usoro ikpo okwu iji mee ka mmụba nke ozi gị dịkwuo nfe na netwọkụ ndị Fans gị. Chegodi inwe ike ijide adreesị ozi-e nke onye ọ bụla na-eme mmekọrịta gị na ndị ahịa gị, ka i wee bulie listi email gị ma kwalite onyinye ndị ọzọ maka ndị nwegasịrị!
Janrain Engage bụ azịza ntụgharị nke na-enye ndị ọrụ ike ịdebanye aha ma ọ bụ banye na saịtị gị site na iji akaụntụ 25+ na-elekọta mmadụ na ndị na-eweta email, gụnyere Facebook, Google, Twitter na Yahoo !. Mee ndebanye aha dị mfe, kpochapụ mkpa maka ndị ọrụ iji cheta okwuntughe ma nweta data profaịlụ bara ọgaranya site na akaụntụ netwọkụ mmekọrịta nke onye ọrụ na ikikere.
Janrain siri ike nke oma. Ọ bụrụ na CMS gị bụ WordPress, enwere a ngwa siri ike iji mee ka Tinye na saịtị ma ọ bụ blog gị. Janrain na-ejikọ ọnụ na usoro ịza ajụjụ ndị a ma ama dịka Disqus, Echo na Pluck.
Imejuputa Janrain nwere ike inyere aka ahia ahia gi na uru ndia:
Dịkwuo saịtị Ndebanye aha - Belata ihe mgbochi idebanye aha, mee ka usoro ntinye aha dịkwuo elu ma mụbaa ọnụego ndị ntụgharị site na ndị ọbịa na saịtị ka ndị ọrụ edebanyere aha site na ịbanye nbanye na ịkparịta ụka n'socialntanet ma ọ bụ akaụntụ ozi weebụ.
Mepụta ihe ndị ọzọ emere onwe gị, na ahụmịhe ahụmahụ - formsdị ndebanye ndebanye aha ma nyekwuo ahụmịhe, ahaziri iche maka ndị ọrụ gị site na ịbubata data profaịlụ onye ọrụ bara ọgaranya, ndepụta ndị enyi na adreesị.
Na-eto Eto Azụmaahịa ma mepụta Mbugharị Ntugharị --Jikọta saịtị gị na ntanetị mmekọrịta ma nye ndị ọrụ gị ohere ịgbasa ọdịnaya gị site na ime ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ibipụta ọrụ sitere na saịtị gị gaa na ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta n'otu oge.
Tags: tinye akaogechijanrain itinye akammekorita ndi mmadundebanye aha onye ọrụwordpress mwekotandebanye aha WordPress